Yenza iibrashi zakho zeFotohop ngokukhawuleza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Photoshop, Izibonelelo
Los iibrashi Photoshop Zisetyenziswa ngokubanzi ngabazobi bemizobo abafuna ukufaka iinkcukacha ezincinci, ezikhawulezayo emsebenzini wabo wegraphic. Ukusuka kwiibrashi zeenkcukacha ezincinci ukuya kwiibrashi ezintsonkothileyo, isibonelelo solu hlobo lwezixhobo kwi-Intanethi sibanzi kakhulu (ezinye zikhutshelwa apha). Yenza iibrashi zakho ze-Photoshop ngokukhawuleza, oku kuba lihlakani elikhulu xa kuziwa ekuphuculeni ubuchule kuba unakho sebenza nezixhobo zakho zokuyila.
Yenza iibrashi zakho kwi Photoshop izokunceda yonga ixesha kwiiprojekthi zakho zemizobo ngaxeshanye ukuba ukwazi ukwenza ithala leencwadi leebrashi zakho. Yenza iibrashi ezizodwa Kwiiprojekthi zakho zemizobo, sebenzisa utyikityo lomculi wakho ngokungathi ibrashi, dibanisa zonke iintlobo zebrashi ukufezekisa into entsha ngokupheleleyo. Iibrashi zizixhobo ezibonakalayo esimele singaze sizilibale.
IPodemos yenza ibrashi ngayo nayiphi na into ebhaliweyo:
Amathuba ngeebrashi akanamda ukwazi ukwenza ukwakheka, iipateni kunye nezinye izinto ezibonakalayo ezinomtsalane.
Ekuphela kwento esiyifunayo ukwenza ibrashi kukuba nezinto ezibonakalayo ukuze siyiguqule ibrashi.
ukuba yenza ibrashi ngomfanekiso into ekufuneka siyenzile kukukhetha kuphela umfanekiso ngokucinezela lawula ukucofa ngakumbi kumaleko womfanekiso. Emva koku, into elandelayo ekufuneka siyenzile kukuya kwimenyu ephezulu kwaye ukhethe hlela / chaza ixabiso lebrashi, Kulapho sigcina khona ibrashi yethu.
Emva kwexesha ekuphela kwento ekufuneka siyenzile ukusebenzisa ibrashi yethu yile yijonge kwikhathalogu yebrashi Photoshop. Singadala ibrashi nomtyikityo wethu wegcisa kwaye uyisebenzise njenge logo ngokukhawuleza. Abanye abantu basebenzisa olu hlobo lwe iibhrashi zokufaka ii-watermark kwimisebenzi yakho yemizobo.
Kwimizuzu nje embalwa ungakwazi yenza iibrashi zakho kwaye uzisebenzise kuwo wonke umsebenzi wakho wegraphic. Zama kunye nabo kwaye wonwabe ekudaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Photoshop » Yenza iibrashi zakho ze-Photoshop